‘ह्याप्पी डेज’ शोमा प्रियंका र संजयको ह्याप्पी मुड ! « Ramailo छ
‘ह्याप्पी डेज’ शोमा प्रियंका र संजयको ह्याप्पी मुड !
आजदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘ह्याप्पी डेज’को प्रेश शो गरिएको छ । प्रेश शोमा नायिका प्रियंका कार्की र नायक संजय गुप्ता ह्याप्पी मुडमा प्रस्तुत भए । उनीहरुसँगै शोमा निर्देशक मिलन चाम्स, कलाकार विक्की जोशी लगायत उपस्थित थिए ।
पुरै जसो फिल्म युरोप खिचिएको ‘ह्याप्पी डेज’ लाई प्रेश शोमा राम्रै प्रतिक्रिया मिल्यो । फिल्म हेरेपछि प्रियंका, निर्देशक चाम्स र संजय दंग देखिए । पहिलो दिनमा पनि हलमा दर्शकको उपस्थिति निराशजनक नरहेकाले टिम खुसी नै रहेको प्रियंकाले बताइन् । ‘सफर’पछि दोश्रो पटक दर्शकमाझ आएका संजयले आफ्नो दोश्रो फिल्म ‘ह्याप्पी डेज’ लाई दर्शकले मन पराउने बताए ।
चाम्स इन्टरटेनमेन्ट र लण्डन सिन आइजको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ राईको पनि मुख्य भूमिका छ । तर अर्को फिल्म छायाँकनका कारण दया ‘ह्याप्पी डेज’को कुनै पनि प्रचारात्मक कार्यक्रममा सहभागी भैरहेका छैनन् ।